Iindaba-Intshayelelo yeglasi yeFibre
Uboya beglasi luhlobo lwefungi yokufakelwa. Isebenzisa isanti ye-quartz, i-limestone, i-dolomite kunye nezinye i ores zendalo njengezinto eziphambili zokupheka, zidityaniswe nesoda eshisayo, i-borax kunye nezinye izixhobo zekhemikhali zokunyibilikisa kwiglasi. Kwimo etyibilikisiweyo, iphoswa kwiifayile ezintle ezinokuntywila ngokusebenza kwangaphandle nangaphandle kokubetha. Iintsinga kunye neefayibha zijijeke kathathu ngokomlinganiso kwaye zidibene kunye, zibonise izithuba ezininzi ezincinci. Izithuba ezinjalo zinokuthathwa njengeepores. Ke ngoko, uboya beglasi bunokuthathwa njengesixhobo se-porous esinezinto ezilungileyo zokufakelwa kombane kunye neepropati zokuntywila kwezandi.
Uboya beglasi ye-centrifugal buziva bunokugcwala kakhulu kunye neempawu zokungena kwesandi, ngakumbi inefuthe lokufunxa ngokuhamba rhoqo kunye neengxolo ezahlukeneyo zokuqubha, eziluncedo ekunciphiseni ungcoliseko lwengxolo kunye nokuphucula imeko yokusebenza.
Uboya beglasi obuvakala nge-aluminium foil veneer bukwanakho nokuqina kobushushu bemitha. Yeyona nto ifanelekileyo yesandi yokugquma kwiworkshop enobushushu obuphezulu, amagumbi okulawula, amagumbi egumbi loomatshini, igumbi kunye nophahla olusicaba.
Uboya beglasi obungenayo imililo (bunokugqunywe nge-aluminium foil, njl njl.) Ineenzuzo ezininzi ezifana nokubuyiselwa komlilo, ukungabinobuthi, ukumelana nokuqina, ukuxinana kwenani eliphantsi, ukuqhuba okuncinci kwegesi, ukuqina kwamachiza, ukumanzisa okuphantsi komhlaba, njl. .
Umxholo ophantsi weglasi yohlobo lweglasi ye-slag kunye nefibre etyibilikayo inokuwugquma kakuhle umoya kwaye iwuthintele ekuhambeni. Isusa ukugqithiswa kobushushu bomoya, kunciphisa kakhulu ukuqhutywa kwemveliso ngokufudumeleyo, kwaye ikhawuleze ukuhambisa isandi, ngenxa yoko ine-insulin efanelekileyo yokufakelwa, ukufakwa kwesandi kunye nefuthe lokunciphisa umsindo.
Uboya beglasi yethu bunamaqondo aphezulu obushushu obuzinzileyo, ukuhlala ixesha elide kunye nokumelana nobushushu obuphezulu be-shrinkage. Inokugcina ukhuseleko, uzinzo kunye nokusebenza okuphezulu ixesha elide ngaphakathi kohlobo lokushisa olucetyiswayo kunye neemeko eziqhelekileyo zokusebenza.
Amanzi asekelezwe ekubhekiseleni kubunako besixhobo sokumelana nokungena kwamanzi. Uboya beglasi yethu bufezekisa inqanaba lokukhutshelwa kwamanzi okungekho ngaphantsi kwe-98%, eyenza ukuba isebenze ngokuzinzileyo kunye nokuzinza kwe-thermal.
Ingenayo i-asbestos, akukho kubumba, akukho siseko sokukhula kwe-microbial, kwaye yamkelwa njengemveliso enobume bendalo liZiko lokuVavanya iZinto zeZakhiwo zikaZwelonke.
Ixesha lokuposa: Jul-13-2020